> Resource > Beddelaan > Video inay Zune Converter: Beddelaan Video si fudud Zune
Wondershare Video inay Zune Converter waa xal fiican ee isticmaala Zune u saaray video joogto ah ay files ciyaartoy Zune. Waxaa loogu badalo karaa ugu qaabab video joogto ah si Zune qaabab taageeray. Oo sidaas waa inaad ka daawan kartaa jecel oo dhan videos, xitaa podcasts video, widescreen video on go ah oo aad Zune.
1 Load files Video
Fisrt, waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo iyo tan Video inay Zune Converter dajiyo. Ka dib markii la rakibey, riix "File"> "Add Files" doorasho inay dajiyaan video files aad rabto in aad si loogu badalo in ay Zune. Haddii kale, haddii aad videos waa soo dhow yahay, oo kaliya si toos ah kuwaa oo in barnaamijkan. Isla markiiba, waxaad ka arki kartaa oo dhan videos keeno waa liiska in ay leeg- bidix ee app this, sida ku cad thumbnails.
2 Dooro qaab Zune socon
Ma ogi waxa format ugu fiican ee Zune? Waa dhib ma laha. Waxaad dooran kartaa si toos ah qaab wax soo saarka filaayo in Zune qaab wax soo saarka ay. Si aad u samayn, guji qaab icon ku saabsan "qaab Output" guddi, u tag Device, ka dibna riix arrow icon dhibic si ay u maraan si ay "kuwa kale" category. Halkan, dooro "Zune" sida qaab wax soo saarka.
3 Edit videos files (Ikhtiyaar)
Riix "Edit" menu ka dibna aad kala dooran karo qaar ka mid ah sida "jar", "Dalag", "Saamaynta", "Watermark" iyo "Cinwaan". "Jar" ​​gelineya inaad si sax ah u hesho gabal ah ee file video ah. "Dalag" aad u saamaxaaya in ay dalagga, shaandheyn videos. "Saamaynta" ha kartaa in aad ku darto saamaynta qabow kala duwan si aad video. Haddii aad rabto inaad ku biirto oo dhan video files galay mid ka mid weyn, waxaad riixi kartaa "ayuu ku milmaan oo dhan videos galay mid ka mid file" doorasho ee interface ugu muhiimsan ee barnaamijkan ee.
4 Beddelaan video in Zune
In geeska hoose ee garabka midig ee this video in Zune interface ugu weyn ee Converter, guji "Beddelaan" button in tanuna ha app diinta video in Zune qaab socon aad u. Hawlaha qaab beddelidda Tani aad qaadan doonta muddo, inta badan ku xiran tahay tirada iyo baaxadda aad videos sidoo kale qaab ciyaareed aad computer ee.
Ka dib markii ay diinta ka, waxaad ka heli doontaa waxa la jirin dhibaato waqti dheer si ay u gudbiyaan files si ay Zune. Just leeyihiin isku day ah.
Features Key ee Wondershare Video inay Zune Converter
Beddelaan video in Zune video ama maqal ah
Si buuxda u taageeraan Zune 1 iyo Zune2 ah.
Beddelaan video in ZuneZune 2 video format (MP4, wmv) tayada wax soo saarka fiican.
Beddelaan audio ka video in Zune WMA iyo MP3.
Taageer saamiga video dhinac kala duwan oo ay ku jiraan 16: 9, 4: 3 iyo shaashad buuxda.
Goo cidhifyada madow ka video iyo daawan video on Zune la shaashad buuxda.
Jar dhererka wax ku daray video files qabsadaan clips aad jeceshahay
Doonayaa inaan sameeyo gaarka ah movie? Just darto saamaynta farshaxanka si aad videos.
Ku dar labada text ama image sida watermark in Diinaar iyo midabka video files hab shakhsi.
Oo la wareegtay Screenshot movie ugu jecel yahay oo ku badbaadin sida jpeg ama qaab bmp on your computer.